Okwalabo abafuna incwadi yochungechunge iKadin (Owesifazane noma Amandla Omfazi) | Izincwadi Zamanje
Izincwadi Zamanje | | Amabhuku, eziningana
IKadin, eyaziwa futhi emazweni ahlukene njenge Umjer, Amandla Owesifazane kusekelwe ochungechungeni Owesifazane, impilo yami yezingane zami ngu Yuji Sakamoto. Kube yimpumelelo yomhlaba wonke, yasakazwa emazweni angama-65.
Into yokuhlela esiyibonile isikhathi eside impela ukuthi ukuthengiswa kwezincwadi ezivela kumdlalo owuchungechunge nakuma-movie enza imali enkulu. Kwesinye isikhathi kuyizinoveli ebezincike kuzo kanti kwezinye ziyizincwadi ezishicilelwa ngemuva kwempumelelo yethelevishini noma yefilimu. Izinkulungwane zabantu zifuna ukufunda incwadi mayelana nalolu chungechunge abaluthandile.
Sikubonile lokhu muva nje nabathobekile UCastamar noma nabaphumelele Umdlalo Wamakhosi.
Ngakho-ke icala lowesifazane (uKadin) linelukuluku lokwazi, ngoba uchungechunge luphela lapho uBahar eshicilela incwadi ephumelelayo ngempilo yakhe. Le ncwadi isitshela ngempela ngesikubonile ochungechungeni.
Futhi ngokudabukisayo nonke niyazibuza, yona kanye le ncwadi okungenzeka ukuthi bayayithengisa ayikho ngempela. Ayikho incwadi eshicilelwe ochungechungeni, noma ngabe inakho konke ukuphumelela.
1 Uchungechunge lwesakhiwo (luqukethe ama-spoiler)
3.1 Abalingisi abakhulu
3.2 Ingoma yomculo
Uchungechunge lwesakhiwo (luqukethe ama-spoiler)
UBahar Sismeli, ungumama, umfelokazi, unezingane ezimbili eziya komunye wemiphakathi empofu kakhulu eTurkey, futhi ogula kakhulu. Washiywa ngunina esemncane futhi
Ukusuka lapha sizobona impilo yakhe yansuku zonke kanye nokuzidela akwenzela izingane zakhe okuzomholela ezimweni ezimbi kakhulu futhi ezingalindelekile neze, ezizohlanganisa umdlalo weshashalazi nokuhlekisa.
Ukubuya komyeni wakhe, ayekholelwa ukuthi ushonile, futhi oseshade unezingane ezimbili. Kanjani, engahlosile, ungena ezinhlangothini ezihlukene zamaqembu ezigelekeqe, abe namandla ngokwengeziwe. Ukubuyisana nonina, nesimo sikadadewabo, uSirin, ongububi obukhulu futhi obangela zonke izinkinga empilweni yakhe.
UBahar, uzothandana nabesilisa abaningana, uzolahlekelwa, uzokwakha kabusha umndeni ozungezwe abangane abambalwa abahamba naye kuyo yonke le migilingwane, nasezimweni zakhe ezimbi kakhulu futhi uyogcina esengumuntu ophumelelayo ngokushicilelwa kwencwadi incwadi ngempilo yakhe.
Incwadi ngeshwa asikwazi ukuyithola, noma singayibona enguqulweni yayo ebonakalayo kuchungechunge
Imibono eyehlukene isekela konke okwenziwayo. Okubaluleke kakhulu, ukunika amandla abesifazane, ikakhulukazi ezweni elifana neTurkey lapho i-machismo ikhona kakhulu kunakwamanye amazwe asentshonalanga. Indaba kaBahar ngeyowesifazane ozihambela phambili yedwa, ngaphandle kwazo zonke izingibe namasu abawabeka kuye, ngokuzimela. Futhi ezahlukweni eziningi sibona izinkomba ezimelene nokuhlukunyezwa, futhi zivuna ukulingana nenkululeko.
Angifuni ukuthi izingane zami zikhule zibuka owesilisa eshaya abesifazane nganoma yisiphi isizathu, angifuni ukuthi amadoda ashaye abesifazane nganoma yisiphi isizathu
Uchungechunge lwaseTurkey olubukwe kakhulu emhlabeni, isakazwe emazweni angama-65. Kwakhiwa izinkathi ezi-3 kanye nezahluko ezingama-81, kwaba yinqola yeTokyo Drama Awards ngonyaka ka-2018. Njengoba sishilo, kusekelwe kolunye uchungechunge oluthi, Woman by Yuji Sakamoto
U-gezge Özpirinçci njengoBahar Çesmeli (ophambili)
USeray Kaya njengo-inirin Sarıkadı (udadewabo kanina kaBahar no-baddie, idimoni)
UKubra Suzgun njengoNisan Çesmeli (indodakazi endala kaBahar)
U-Ali Semi Sefil njengoDoruk Çesmeli (indodana encane kaBahar)
UFeyyaz Duman njengo-Arif Kara (umninindlu futhi uthandana noBahar, ozogcina esengumlingani wakhe)
USerif Erol njengo-Enver Sarikadi (usingababa kaBahar nobaba kaSirin)
UGökçe Eyüboglu njengoCeyda (umngani omkhulu kaBahar ozohamba naye kulo lonke lolu chungechunge)
UBennu Yildirimlar njengoHatice Sarikadi (unina kaBahar)
UCaner Cindoruk njengoSarp Çesmeli (umyeni kaBahar)
Kuyingxenye ebaluleke kakhulu yochungechunge. Ngomculo onamandla nokhomba kahle bayakwazi ukusinika ingqikithi. Ngaso leso sikhathi uyazi lapho kuzokwenzeka ishwa noma isimo samahlaya, ngamanothi ama-2 kuphela ozifaka kuwo. Abakhi balokhu kukhona I-Cem Tuncer ne-Ercüment Orkut, abaqambi ababili abahle kakhulu eTurkey.
Umlingiswa ngamunye uhlotshaniswa nomculo ohlukile wezigcawu azilingisa kuzo. Uma uthandene, ungawuthola umsindo wayo lapha.
Thina sizobe sinake ukukwazisa uma bekushicilela. Futhi uma unesithakazelo kithi sikhuluma ngamanoveli lapho uchungechunge lwakho oluthandayo lususelwa khona, sishiyele amazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Incwadi yochungechunge lweKadin, eyaziwa ngokuthi yi-Woman noma i-Force of Woman